အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးကျန်းမာရေး Archives - Page2of9- OnDoctor
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဒီလို လက္ခဏာတွေ ရှိနေရင်
ဇီဝကတို့ ပြည်သူများအနေနဲ့ ဘေးစကား အရပ်စကားများကြောင့် “ကာကွယ်ဆေးများကို မိမိတို့ကလေးကို ထိုးသင့်သလား ၊ ကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲ ၊ ဆေးထိုးပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ ၊ ကလေးကို တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ ကာကွယ်ဆေးအများကြီး ထိုးတာကရော အဆင်ပြေရဲ့လား ၊ ကာကွယ်ဆေး မထိုးဘဲ နဲ့ရော နေလို့ဖြစ်သလား” ထိုထိုသော ဒွိဟ သံသယ အမေးများအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဖြေကြားချက်များကို မှီငြမ်းပြီး ယခုဆောင်းပါးမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Vaccine ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဘာလဲ -Vaccine ကာကွယ်ဆေးဆိုတာ ဇီဝပစ္စည်း တစ်ခုပါ။ ထိုပစ္စည်းကို ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ ပိုးမွှားကလေးများနဲ့ အတူဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ ဘယ်လို ပြုပြင်ထားသလဲ ဆိုရင် ထိုပိုးမွှား အသေကောင်လေးများ ၊ ရောဂါ မဖြစ်လောက်တဲ့အထိ အားနည်းအောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းများ […]
အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်များဖြစ်သော ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေးသည် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမှသာ ပညာရေးကို ကောင်းစွာသင်ကြားနိုင်ပါမည်။ ကလေးများ ကျန်းမာစေရန်အတွက် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးသည်လည်း များစွာလိုအပ်ပါသည်။ မိဘအုပ်ထိန်းသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ကလေးငယ်များ၏ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို အထူးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ (၁) အိပ်ရာထချိန် သန့်ရှင်းရေး ကလးငယ်များ အိပ်ရာထလာပါက မျက်နှာသစ်ပေးခြင်း၊ သွားတိုက်ပေးခြင်း၊ လက်ဆေးပေးခြင်းနှင့် ခေါင်းဖြီးပေးခြင်း စသည့်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။ ကလေးများကိုလည်း မနက်စောစော အိပ်ရာထကတည်းက ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပေးရပါမည်။ (၂) လက်သန့်ရှင်းရေး ကလေးငယ်များအား ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် လက်ဆေးခြင်းကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်လာတတ်စေရန် သင်ပေးရပါမည်။ လက်ကိုရေဆေး၊ ဆပ်ပြာတိုက်၊ သန့်စင်စေရန် လက်နှစ်ဖက်ပွတ်တိုက်ခြင်းကို လက်တွေ့ပြပြီး သင်ပေးရပါမည်။ အစားမစားမီနှင့် အစာစားပြီးတိုင်း၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း၊ အညစ်အကြေးစွန့်ပြီးတိုင်း၊ လက်ဆေးသော အလေ့အကျင့်ကိုလည်း […]
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကလေးတိုးသည် ဆိုရာဝယ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ဇီဝက့ကို ပြောပြတတ်တာက “ဗိုက်ထဲမှာ လှုပ်တုတ်တုတ် နဲ့ ကလေးတိုးတာလား ဆရာ” “ကလေးက အခုချိန်ထိ မတိုးသေးဘူး ၊ဆရာ ။ဘာလုပ်ရမလဲ ။” “ကလေးက တစ်ချိန်လုံးလှုပ်နေတာပဲ ၊အဲ့တာကောင်းလား ၊ဆရာ ။” ထိုထိုသော အမေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအပြင် စာဖတ်သူတွေပါ ဗဟုသုတရအောင် ဒီဆောင်းပါးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ကလေးတိုးခြင်းအကြောင်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကလေးတိုးတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ -မိခင်အနေနဲ့ မိမိ ဗိုက်ထဲက ကလေးလှုပ်နေတာ ကန်ကျောက်တာကို ကလေးတိုးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကလေး ဘာကြောင့် တိုးရတာလဲ -ကလေးတိုးတယ်ဆိုတာ ကလေးအနေနဲ့ အကြောအချဉ် ဆန့်လှုပ်ရှားတာပါ ။ -ဒါ့အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်က အသံ ၊မိခင်စားလိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေကြောင့်လည်း ကလေးက တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ […]
မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးရင် ကလေးအတွက်သာမက မိခင်အတွက်ပါ ကျန်းမာရေးသုခနဲ့ ပြည့်စုံပါတယ်။ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးသုခတွေလဲ ဆိုတာ သိချင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရင် အောက်ပါ ကျန်းမာရေးသုခများနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ -မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတဲ့အခါ မိခင်နဲ့ မိမိကလေး အကြည့်ချင်းဆုံသဖြင့် ပီတိသောမနာသဖြစ်ကာ မိခင်မှာ စိတ်ဘဝင် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ရပါတယ်။ -ကလေးက မိခင်နို့ကို စို့တဲ့အခါ အောက်ဆီတိုစင် ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းလ် ထွက်လာကာ မိခင်နဲ့ ကလေးကြား ယုံကြည်မှုတိုးလာစေကာ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ -ထို အောက်ဆီတိုစင်သည် မိခင်ရဲ့ သားအိမ်ညှစ်အားကို အားပေးသဖြင့် မီးဖွားပြီးသွေးသွန်တာကို လျော့နည်းစေပါသေးတယ်။ -မိခင်နို့ထဲမှာ မပြည့်ဝတဲ့ ဖက်တီးအက်ဆစ် Poly unsaturated fatty acid ပါတဲ့အတွက် အင်ဆူလင်အာနိသင်ကျလို့ ဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုနဲ့ အဝလွန်ခြင်း ၊ သွေးတိုးခြင်းများကို […]
ကလေးများ ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်အောင် မေမေတို့က ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သလဲ?
ပြေးလွှားကစားခြင်းနဲ့ စူးစမ်းဖွေရှာခြင်းဟာ ကလေးများရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အတွက် အရေးပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရောဂါပိုးမွှားတွေနဲ့ ထိတွေ့နိုင်ပြန်ပါတယ်။ ကလေးများအနေနဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ရောဂါပိုးမွှားတွေကို ခုခံကာကွယ်နိုင်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေမေတစ်ချို့ကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ဖို့ ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်ကောင်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါမှာ အာဟာရမျှတစွာစားသုံးခြင်း၊ ဇင့်၊ ဗီတာမင် (A, D, B6) တို့လို ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးသောအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ နွားနို့သောက်သုံးခြင်းတို့က အဓိကအချက်များဖြစ်တယ်လို့ သူတို့က တညီတညွတ်တည်း ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် ခိုင်မိုဘိုင်း နှင့် Queen Telecom မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ပိုင်ရှင် သားလေးယောက်ရှိ၊ အငယ်ဆုံး အစ်မမှာက သားယောက်ျားလေးကြီးပဲ ၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ ၃ ယောက်ကတော့ အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ အခုသားအငယ်ဆုံးလေးကတော့ ၈နှစ်ရှိပါပြီ။ သားလေးက ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် ချူချာတယ်ပြောရမယ်။ […]
မေမေလိုချင်တဲ့ သားလေးပါ မေမေရယ်
ကျွန်တော်တို့ အလုပ်သင်ဆရာဝန်ဆင်းတုန်းက ဇာတ်လမ်းအဖုံဖုံကို တွေ့ကြုံရတယ်။ လူနာတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ လူနာတွေရဲ့ အကြောင်းတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်တွေ့ရတဲ့ အချိန်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ တစ်နေ့တော့ သားဖွားမီးယပ်ဆောင်မှာ တာဝန်ကျနေတုန်း သွေးဆင်းတဲ့ လူနာတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ လူနာရဲ့ ရာဇဝင်ကို စမ်းသပ်မေးမြန်းတာတွေ လုပ်တော့ ရာသီမလာတာ ၅ လရှိပြီတဲ့။ ဘာတွေလုပ်လာသေးလည်းမေးတော့ ဘာမှမလုပ်လာဘူးတဲ့။ သူ့အရင်အရင်တွေကလည်း ဒီလိုပုံတွေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖူးတဲ့ လူနာတွေ ခဏခဏတွေ့ဖူးတော့ ဘာတွေလုပ်လာတာလည်း ပြော၊ ဘယ်သူကိုမှ တရားစွဲတာတွေ ဘာတွေမလုပ်ဘူးဆိုပြီး ချော့မော့မေးရတာပေါ့။ ဒီတော့မှ အရပ်လက်သည်ဆီမှာ ကလေးဖျက်ချလာတာပါတဲ့။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖျက်ချလဲမေးတော့ ဗိုက်ထဲကို သစ်သားချောင်းထိုးထည့်ပြီး မွှေလိုက်တာတဲ့။ တခြားသူတွေအတွက်သာ ဒီနည်းက မျက်လုံးပြူးစရာဖြစ်မယ် ကိုယ်တွေက ကြုံနေကျတွေဆိုတော့ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ သူတွေမှာ သစ်သားချောင်းတွေ […]
ပိုလီယိုရောဂါကို ဆေးပညာအရ Poliomyelitis လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ Poliovirus လို့ ခေါ်တဲ့ RNA အမျိုးအစား ဗိုင်းရပ်ပိုး ဝင်ရောက်လို့ ဖြစ်တာပါ။ အလွန်ကူးစက်မြန်သော ရောဂါဖြစ်ပြီး ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်ပိုး အမျိုးအစား (၁)၊ (၂)၊ (၃) ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ဝင်ရောက်ကူးစက်တတ်လဲဆိုတော့ အစာလမ်းကြောင်း Faecal-oral route ကနေတဆင့် ကူးစက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အစားအသောက် မသန့်ရှင်းတာတွေ စားမိ၊သောက်မိရာကနေ တဆင့်ပါ။ နောက်ပြီး ပိုလီယိုရောဂါရှိသူရဲ့ တံတွေး၊ မစင် တွေနဲ့ ထိမိရာကနေတဆင့်လည်း ကူးနိုင်ပါတယ်။ ပိုလီယို ရောဂါပိုးသည် အသက်(၅)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များကို အဓိက ထိခိုက် ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ပိုလီယိုရောဂါပိုးကူးစက်တိုင်းတော့ အကြောသေရောဂါမဖြစ်ပါဘူး။ ပိုလီယိုရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ကလေးငယ်များအတွက် ပျားရည်က တကယ်ကောင်းသလား
မိုးကလေး တဖွဲဖွဲနဲ့ မီးပျက်ကာ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး အမှောင်အတိဖုံးနေသော ညတစ်ညဝယ် ။စာရေးသူလည်း ည ၉နာရီ ဆေးခန်းပိတ်ချိန် နီးပြီမို့ တပည့်ကျော်ကို မှာစရာရှိတာ မှာနေခိုက် ဝတ်ဆန်ဆိုသည့် ကလေးမ တံခါးရွက်ကြားက ဘွားခနဲ ခေါင်းပြူကာ ဝတ်ဆန်။ ။ ဆရာ ၊ဆေးခန်း ပိတ်တော့မလို့လား ။ ဇီဝက ။ ။ ဟဲ့ ၊လန့်လိုက်တာဟယ် ။အသံလေး ဘာလေး ပြုပါဦး ဟ ၊မိ ဝတ်ဆန်ရ ။အေး ပိတ်တော့မလို့ ။ ဆို ဘာဖြစ်လို့လဲ ။ ဝတ်ဆန်။ ။ ဆောရီးနော် ၊ဆရာ ။စက်ရုံဖယ်ရီကား ပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်း ဆရာ့ဆီ အပြေးလာခဲ့တာ ။မမီတော့မှာစိုးလို့။ မေးစရာလေး ရှိလို့ပါ […]
Dr 528 နှင့် ရှာရှာဖွေဖွေမေးခွန်းများ (၁)
အွန်လိုင်းအမေးအဖြေမှာ ဝင်ဖြေတာ ၁နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ ရှာရှာဖွေဖွေ ထူးထူးဆန်းဆန်းမေးခွန်းတွေလည်း အများကြီးကြုံရပါတယ်။ တချို့ပရိသတ်တွေက တကယ့်ကိုမေးခွန်းမေးတာ တော်ကြပါတယ်။ထိုသူတို့ ရှာရှာဖွေဖွေမေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အားလုံးဗဟုသုတရအောင် ဆောင်းပါးအနေနဲ့စုစည်းတင်ပြချင်ပါတယ်။ အခုအပိုင်း(၁)မှာတော့ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေး(Emergency Oral Contraceptive Pills)နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးအရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြပါရစေ။ အရေးပေါ်သန္ဓေတားဆေး ထုတ်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က တကယ့်ကိုအရေးပေါ် အခြေအနေမှသာ သောက်ဖို့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ သုံးဖို့ထုတ်ထားလဲဆိုတော့ ဥပမာ အလိုမတူဘဲ အနိုင်ကျင့်ခံရရင်၊ ကွန်ဒုံး အသုံးပြုနေရင်းနဲ့ မတော်တဆ ကွန်ဒုံးပေါက်ပြဲသွားရင်၊ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင် နောက်ပြီး ခရီးသွားရင်းနဲ့ အတူနေခဲ့မိတယ် ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ဆေးဝယ်ဖို့ကလည်းချက်ချင်းမလွယ်ဘူး။ နောက်တစ်ရက်လောက်မှ ဆေးဝယ်လို့ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် အတူနေတဲ့ညမှာ မိုးသက်လေပြင်းတွေကျလို့ ချက်ချင်းဆေးထွက်ဝယ်ဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ မနက်ဖြန် သို့မဟုတ် သန်ဘက်ခါမှ ဆေးဝယ်လို့ရမယ်။ စတဲ့အခြေအနေတွေ အတွက် […]
နှစ်နှစ် အထက် ကလေးတွေ ကို နို့တိုက်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုအချက်တွေကြည့်သင့်သလဲ????
နှစ်နှစ် အထက် ကလေးတွေ ကို နို့တိုက်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုအချက်တွေကြည့်သင့်သလဲ???? အခု ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ခေတ်ကာလ နှင့် အညီ မိဘတွေ ကလည်း မိမိတို့ကလေးငယ်တွေ အတွက် နို့ကို သတိတရ တိုက်လာကြပါတယ်။ ဒီတော့ နို့တိုက်တဲ့ နေရာ မှာသတိထား သင့်တဲ့ အချက်လေး တွေ ပို အကျိုးရှိမယ့် အချက်လေးတွေကို တော့ သိသင့်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း နို့တွေက လည်း တံဆိပ်မျိုးစုံ နဲ့ ရောင်းလာကြပါတယ်။ တနိုင်တပိုင် နွားနို့ က အစစူပါမားကတ် တွေ မှာ ရောင်း တဲ့ fortified milk (အာပာာရထပ်ဖြည့် ထားသောနို့) တွေအထိရွေးချယ်စရာတွေရှိလာပါတယ်။Fortified Milk မှာ […]